ANTOKA HO AMIN’NY HO AVIN’NY ANKIZY NY FIDIRANY AN-TSEKOLY. | Zouboon
ANTOKA HO AMIN’NY HO AVIN’NY ANKIZY NY FIDIRANY AN-TSEKOLY.
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 7:15
Mahatratra 96% ny ezaka efa tratra ho an’ny fampidirana an-tsekoly ny ankizy manerana ny nosy. Fantatra io salan’isa io tao aorian’ny fikarohana nataon’ny UNICEF.
Raha tombanana anefa izany , dia hita fa mbola lavitra ny ezaka tokony hotratrarina . Ilain’ny ankizy anefa ny mandranto fianarana mba hampitomboany ny fahalalany hananany ho avy mamiratra. Nefa raha ny salan’isa hita eto Madgasikara io anefa no dinihina, mbola mila ezaka ny manatratra ny 4% ambiny.
Araka io fikarohana io ihany, dia fantatra ihany koa fa ny zaza tsy nandalo fianarana dia mivarilavo amin’ny fiainana. “Tsy mihitatra ny saina fa misy fetrany rehefa tsy mianatra ny olona iray” hoy ity Psychologue iray tamin’ny boky navoakany. Midika izany fa antoka lehibe ho an’ny olona iray amin’ny fananany farim-piainana tsaratsara kokoa ny fidirany any an-tsekoly. Manaraka inzany dia manakana azy tsy hanana saina tia karokaroka izany .
Ankoatra izay , rehefa tsy mandalo fianarana ihany koa ny zaza iray, rehefa lehibe dia tsy hahita asa, na dia mahita aza dia asa tsy mahavelona akory izany. Efa mitaky mari-pahaizana daholo mantsy ny ankamaroan’ny mampiasa rehetra, eny fad a dia asa farany izay tsotra indrindra aza izany.
Ny ray amandreny nahalehibe anefa no tena iankinana’izany. Ampinanaro ny zaza raha tiana hanana ho avy mamiratra . Ireo izay monina sy mipetraka any ambanivohitra mantsy no tena manao ambanin-javatra ny fianarana. Aleo ilay zaza manampy azy amin’ny fambolena sy ny fiompiana, toy izay handranto fianarana lavitra. Raiso ary ny andraikitra, ampianaro ny ankizy.
Mahafinaritra ny mahita ilay tarehimarika 96% 🙂 fa ny tiako ho fantatra hoe atramin’ny taona faha firy no voakasik’io tarehimarika io?
Commentaire par Tahina — juillet 22, 2009 @ 8:13
raha ny fiheverako azy aloha dia hatramin’ny faha 12 na 13 taona eo satria eo no voafetra hoe zaza. sa aona hoy ianao? tsy préci mantsy ny doné ananak
Commentaire par zouboon — juillet 28, 2009 @ 9:44
Possible, mety hoe any amin’ny classes primaires 🙂
Commentaire par Tahina — juillet 29, 2009 @ 7:06